Ukuphathwa Kwezimali Ezesabekayo Zokulawula Ibhizinisi Lakho Lokuqasha Amaholide
Izici » Ukuphathwa Kwezimali
Imikhawulo yenzuzo yezimenenja eziqashisayo zaseholidini kanye nabasebenza emafulethini asetshenzisiwe kuncike kakhulu ekukhipheni wonke amasenti wokugcina ezinsukwini eziphakeme ukuze bathole lokho kubhukha okunamanzi. Kodwa-ke, ukubeka amanani nokuqinisekisa ukuthi kusatshalaliswa ngesikhathi sangempela kuzo zonke iziteshi zokuthengisa kufaka phakathi iwebhusayithi yokubhuka eqondile, kwesinye isikhathi kungaba yinselele.
Ngaphezu kwalokho, njengoba inani lezakhiwo ezingaphansi kwabaphathi likhula, isilinganiso sentela siqala ukuthatha inani elikhulayo lesikhathi somlawuli. Amanani abathengisi bezindawo abathembela kuwo ancike ezimweni zemakethe ezishintsha ngokushesha futhi angashintshashintsha kakhulu kuye ngezici ezithile. Abaphathi bezimali ngokuvamile bakuthola kunzima ukukhipha imininingwane abayidingayo Ohlelweni Lokuphathwa Kwezakhiwo. Ukuntuleka kwama-KPIs atholakala kalula kukhawulela ukusebenza komphathi wezimali.
Amathuluzi Wokuphathwa Kwezimali Zeevou Angasiza kanjani?
I-Zeevou Sell ikuvumela ukuthi usethe amanani akho enkabeni, futhi uwahambise ngaphezulu iziteshi 200 ngesikhathi sangempela, futhi ubenze babonise wedwa iwebhusayithi yokubhuka eqondile. Amanani angasethwa ngobuningi bezinhlobo zamayunithi amaningi ngasikhathi sinye uma wamukela isu elifanayo lamanani entengo kuzo zonke izakhiwo. Intengo ingacaciswa ngosuku lwesonto isikhathi esinikeziwe, futhi ukuhlala okuncane nokukhulu kakhulu nakho kungasethwa.
Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwesilinganiso sokukalwa kwamanani kaZeevou kukuvumela ukuthi unyuse amanani azo zonke izakhiwo edolobheni elinikeziwe ngezinsuku eziphakeme, ukukuthengela isikhathi sokucabanga ngokucophelela ngamanani ofisa ukuwathengisela uhlobo ngalunye lweyunithi ngalezo zinsuku eziphakeme. Wonke amanani asethiwe angabukwa njengohlu, noma kukhalenda yama-multi-unit Rates & Availability. IZeevou ikuvumela futhi ukuthi uthengise izengezo zemikhiqizo nezinsizakalo ezingeziwe, futhi udale ukukhushulwa ngamakhodi wamavawusha noma ngaphandle kwawo wokubekisa ngqo.
Uma kwenzeka ufisa ukwenza ukushintsha kokumaketha nokusetha isilinganiso ngamathuluzi entengo ahlakaniphile afana nalawo I-Airbnb noma ukunikezwa kweVRBO, ungabhalisa nomunye wozakwethu wokuhlanganisa amanani ashukumisayo afana Ngaphandle Kwentengo or IntengoLabs. Lokhu kukuvumela ukuthi wenze ngokuzenzakalela ukusethwa kwamanani akho, bese labo badlulela eZeevou. Sibe sesihambisa la mazinga kuwebhusayithi yakho ukuze ubhuke ngqo, kanye nakunoma yiziphi iziteshi ohlanganise i-Zeevou ekusebenziseni ukuhlanganiswa kwethu kwe-API enezindlela ezi-2.
IZeevou ibuye inikeze imibiko ethile ukuvumela abaphathi bezimali ukuthi basebenze kahle kakhulu. Ngaphandle kombiko wokuthengisa, ababungazi bangaphinda basebenzise umbiko wamaphesenti wokuhlala ukuthola amakhodi anombala, ukumelwa okubonakalayo kwamazinga okuhlala nsuku zonke, kanye nezinkomba ezithile zokhiye zokusebenza zenyanga. Ngaphezu kwalokho, i-Monthly Profit Report ivumela ababungazi ukuba bahlaziye izinzuzo zabo kanye nemali abahola abaninikhaya abayitholayo, ngaleyo ndlela kubasize ukuthi bahlele amanani abo ngokuqhubekayo.